Beddelaan HedgeTrade In US dollar
Updated 19/01/2020 09:29
Beddelka HedgeTrade In US dollar. HedgeTrade qiimaha US dollar maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
1 HedgeTrade = 2.15 US dollar
U beddelo HedgeTrade illaa US dollar celceliska heerka hadda la joogo. Qiimaha sarrifka laga bilaabo HedgeTrade ilaa US dollar) laga soo qaatay keydka macluumaadka lagu kalsoon yahay. Tani waa tixraac ku saabsan heerka sarrifka lacagaha 'lacagta digital'. 1 HedgeTrade waa 2.15 US dollar. Qiimaha 1 HedgeTrade wuxuu hadda la mid yahay 2.15 US dollar. Heerka HedgeTrade sicirka ayaa hoos u dhacay marka loo eego US dollar ee -488 boqol meelood meel dhibic boqolkiiba.
Heerka Sarrifka HedgeTrade In US dollar
Seddex bilood ka hor, HedgeTrade waxaa lagu badali karaa 0.76 US dollar. Lix bilood ka hor, HedgeTrade waxaa lagu badali karaa 0.70 US dollar. Sanad ka hor, HedgeTrade waxaa laga iibsan karaa 0 US dollar. HedgeTrade sicirka sarrifka US dollar waa ku habboon in lagu arko shaxda. 6.23% - isbeddelka heerka sarrifka ee HedgeTrade to US dollar usbuucii. 0% sanadkii - isbedelka heerka sarrifka ee HedgeTrade.
HedgeTrade (HEDG) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
HedgeTrade ugu fiican US dollar
Bixinta ugu fiican HedgeTrade qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso HedgeTrade maanta.
Bancor Network HEDG/ETH $ 2.32 $ 1 899 -
CoinTiger HEDG/BTC $ 2.26 $ 617 852 -
Isbedelka HedgeTrade ugu fiican dhammaan suuqyada adduunka
Beddelaadda Lacagta digital HedgeTrade US dollar
HedgeTrade (HEDG) In US dollar (USD)
1 HedgeTrade 2.15 US dollar
5 HedgeTrade 10.77 US dollar
10 HedgeTrade 21.53 US dollar
25 HedgeTrade 53.83 US dollar
50 HedgeTrade 107.65 US dollar
100 HedgeTrade 215.30 US dollar
250 HedgeTrade 538.26 US dollar
500 HedgeTrade 1 076.52 US dollar
Maanta, 10 HedgeTrade waxaa lagu iibin karaa 21.53 US dollar. Si loogu badalo 25 HedgeTrade, 53.83 US dollar are are loo baahan yahay. Beddelashada 50 HedgeTrade qiimaha 107.65 US dollar. Si loogu badalo 100 HedgeTrade, 215.30 US dollar are are loo baahan yahay. Waad ku badali kartaa 250 HedgeTrade ee loogu talagalay 538.26 US dollar . Beddelaadda 'Lacagta digital' ayaa hadda bixisa 1 076.52 US dollar for 500 HedgeTrade.
HedgeTrade (HEDG) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
Beddelaan HEDG/BTC maanta 19 January 2020
19/01/2020 2.35 -0.050394 ↓
18/01/2020 2.40 0.017276 ↑
17/01/2020 2.39 0.14 ↑
16/01/2020 2.24 -0.004246 ↓
15/01/2020 2.25 0.16 ↑
Maanta 19 January 2020, 1 HedgeTrade = 2.352943 US dollar. HedgeTrade ilaa US dollar ee 18 January 2020 - 2.403337 US dollar. 17 January 2020, 1 HedgeTrade kharashyada 2.386061 US dollar. HedgeTrade to US dollar dusheeda 16 January 2020 waa u siman yahay 2.241872 US dollar. 15 January 2020, 1 HedgeTrade = 2.246118 US dollar.
HedgeTrade (HEDG) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
HedgeTrade iyo US dollar
HedgeTrade codka lacagta digital HEDG. HedgeTrade ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 31/05/2019.